Budada cayriin ee Oxiracetam (62613-82-5) Soosaarayaasha - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker Chemical'
Budada Raw Oxiracetam waxaa loo bartay inay tahay daaweyn suurtagal u ah xusuusta luminta ee la xiriirta cudurka Alzheimer iyo neerfaha kale neuro.
Daawada budada ah ee Oxiracetam (62613-82-5)
Dufanka Oxiracetam Root (62613-82-5) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Oxiracetam
Magaca Kiimikada 2- (4-hydroxy-2-oxopyrrolidine-1-yl) acetamide
Fasalka Daroogada Maandooriyaha Nitrifiska
Molecular Wsideed 158.15
barafku Psaliid 165-168 ° C
Biological Life-Life saacadood 8
Application Nootropic. Analog of Piracetam leh dhaqdhaqaaqa nafsaaniga ah.
Budada Oxaracetam Root (62613-82-5) Sharaxaad
Kiimikada Oxipacetam waa budo Piracetam ah oo soo jiidata habka dhexe ee neerfayaasha, waxay kor u qaadaan dheef-shiid kiimikaadka, waxay si weyn u kordhiyaan oo kor u qaadaan xusuusta, oo si wax ku ool ah ula dhaqmaan xasuusta qarniga iyo hoos u dhaca maskaxda. Waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo cudurrada maskaxda ee dhimirka maskaxda iyo xanuunka maskaxda. Waxay hagaajin kartaa xusuusta iyo awoodda barashada bukaanka qaba cudurka waallida ama xasaasiyadda xasuusta. Waxay ku haboon tahay daawaynta neefsiga neerfaha, dhibaatada xusuusta iyo cudurrada maskaxda oo sababay dhaawaca maskaxda. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daaweynta bogsashada ee neurosis, dhaawaca maskaxda, xanuunka maskaxda, iyo cudurrada kale ee maskaxda. Faa'iidada ugu weyn ee budada Oxiracetam waa in ay tahay mid aad ufilan biyo, taas oo ku haboon cirbadeynta. Cilmi baaris ayaa muujisay in budada Raw Oxiracetam uu leeyahay firfircoonida farshaxanka iyo saameynta daaweynta ee muhiimka ah marka la barbardhigo Piracetam.
Oxiracetam budada (62613-82-5) Mashruuca Waxqabadka
Oxiracetam ayaa si qarsoodi ah loo ilaaliyey amopia-ka-macmiilka amniga labadaba ee dadweynaha iyo dadyowga bini-aadanka, oo soo jeedinaya in ay ka caawin karto dib-u-kabashada suntan culus iyo xaalado kale oo caqli-gal ah oo la taaban karo iyada oo la ilaalinayo heerarka ku filan ee acetylcholin sida asaas aasaasiga ah.
Oxiracetam ayaa lagu muujiyey in la kordhiyo acetylcholinimada gudaha unugyada hippocampal. Sida acetycholine ayaa ku lug leh hawlgalka xasuusta xasuusta, tani waxay ku dhalin kartaa saameyn aan laheyn.
Faa'iidooyinka of Oxiracetam budada (62613-82-5)
talinayo Oxiracetam budada (62613-82-5) Qiyaasta
Dhibaatooyinka ay keento of Oxiracetam budada (62613-82-5)